ပေါ်တူဂီအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
Loading ...ဇန်နဝါရီလ 2018 ၏အဖြစ်, လောင်းကစားပုံစံအားလုံးကိုပေါ်တူဂီအတွက်ဥပဒေရေးရာဖြစ်ကြသည်။ လောင်းကစား Regulator ပေါ်တူဂီ - ServiçoRegulaçãoအီးInspeçãoက de Jogos (SRIJ), မြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားအပါအဝင်နိုင်ငံအတွင်းလောင်းကစားဝိုင်း၏မြေတပြင်လုံးနယ်ပယ်များအတွက်တာဝန်ရှိ။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစား directory ကိုတိုင်းပြည်အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးလောင်းကစားဝိုင်းမှဧည့်သည်များအဘို့သတိပြုပါ, သင်တန်း, အထီဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်အကြီးအောင်မြင်မှုနှင့်အားကစားလောင်းကစားပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
ပေါ်တူဂီမှာ, အွန်လိုင်းလောင်းကစားပုံစံအားလုံးကိုလည်းတရားဝင်ဖြစ်ကြသည်။ ပေါ်တူဂီဥပဒေများအွန်လိုင်းလောင်းကစားလောင်းကစားများ၏မတူကွဲပြားသောပူဇော်သက္ကာနှင့်အတူလွတ်မြောက်ရေးစျေးကွက်ဝန်ခံ, ဥရောပစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူတင်းကျပ်သောအညီ၌ရှိကြ၏။ အွန်လိုင်းကာစီနိုဂိမ်းများကို, အွန်လိုင်းဖဲချပ်နှင့်အွန်လိုင်းအားကစားလောင်းကစားတိုင်းပြည်မြို့သားတို့အကြားအလွန်ရေပန်းစားသည်။
ထိပ်တန်း 10 ပေါ်တူဂီအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
ပေါ်တူဂီထံမှကစားသမားကိုလက်မခံကြောင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂိမ်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ ဒီနေရာတွင် slot ကစက်တွေကနေဂိမ်းတွေ NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, ပြိုင်ဘက်ဂိမ်း, နှင့်အခြားသောကဲ့သို့သောကျော်ကြား software ကိုရောင်းချသူထံမှအသက်ရှင်နေထိုင်လောင်းကစားရုံမှဖျော်ဖြေရေး၏ကျယ်ပြန့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုလည်းအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပရိုမိုးရှင်းများ, ဆုကြေးငွေများနှင့်ပေါ်တူဂီထံမှကစားသမားမှမရရှိနိုင်ပါငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာသတိထားဖြစ်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်နိုင်သည်။
ပေါ်တူဂီ - ပင်လယ်ဘောလုံး, စပျစ်ရည်နှင့်ဒဏ်ငွေရာသီဥတုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေအကြီးအအားလပ်ရက်ဖြုန်းဖို့ဒီကိုလာ, ဒါပေမယ့်လည်းဥရောပအတွက်အကြီးမားဆုံးကာစီနိုလောင်းကစားရုံတစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အနက်ဆုံးသောတွင်းထဲသို့ထိုးရန်။ သူ့ရဲ့နောက်ထပ်မှတ်တိုင် CasinoToplists အဟောင်းနဲ့လှပတဲ့လစ္စဘွန်းအတွက်စေသည် - ပေါ်တူဂီရဲ့မြို့တော်။
ပေါ်တူဂီ - သမိုင်းတစ်နည်းနည်းလည်းအရပ်၌;
2003 မှစ. အွန်လိုင်းကာစီနိုမှသာဒေသခံကုမ္ပဏီစန်တာ CASA က de Misericordia က de Lisboa 2012 ခြင်းငှါ၎င်း,
ဥရောပ၏ဤအပိုငျးရှိလူများသော်လည်း, လမ်းဖြင့်, အများဆုံးအနောက်ပိုင်း, အမြစ်ဟာ XI ရာစုအတွင်းပေါ်တူဂီနိုင်ငံတော်ကထားကြ၏, ငါတို့ခေတ်မတိုင်မီကာလပတျလုံးနေထိုင်ကြတယ်။ ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်ဘို့, ရီးယန်းကျွန်းဆွယ်၏အနောက်ဘက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏နေထိုင်သူများ Lusitanian အဘိဓါန်, ရောမ, Visigoths နှင့်အာရပ်၏တန်ခိုးကြုံတွေ့ကြသည်။ စပိန်ခရိုင်ကနေသီးခြားပြည်နယ် crystallized - ပေါ်တူဂီ, အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကယနေ့အီးယူနှင့် Schengen ဇုန်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ပေါ်တူဂီသူတို့နီးပါး 11 လူဦးရေသန်းအသက်ရှင်နေထိုင်ရသောပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီနှင့် miransky - ဤတွင်2အရာရှိတဦးကဘာသာစကားများဖြစ်ကြသည်။ ပြည်နယ်၏ဦးခေါင်းကို 2014 အတွက်အနေအထားAníbal Cavaco ဆေးလ်ဗားယူထားသော, သမ္မတဖြစ်ပါတယ်။
Continental ကပေါ်တူဂီ 18 ခရိုင်သို့ခှဲဝေနှင့်နိုင်ငံ2ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများပိုင်တာဖြစ်ပါတယ် - Madeira နှင့်အာ့ဇိုရီစ်။
ပေါ်တူဂီပိုင်အထူးကွောကျရှံ့နှင့်အတူလောင်းကစား၏လူများ, လောင်းကစားရုံရှိ, သူတို့ကိုအများကြီး, သူတို့ကပေါ် မူတည်. အလှဆင်ခြင်းနှင့်ပျော်စရာရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေများများပူဇော်လို့ပဲ။
အားလုံးအီးယူနိုင်ငံများရှိကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောလောင်းကစားဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုများပြည်နယ်ကစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်နှင့်တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဒီအဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆိုပါလောင်းကစားရုံများ, ဒါပေမယ့်အားလုံးလောင်းကစားဝိုင်းမသာပါဝင်သည်။ ဒေသခံတွေသူတို့ခရီးသွားဧည့်သလောက်ကတော့လောင်းကစားရုံမှာဖြစ်ကြောင်း, သွေးထဲတွင် adrenaline များ၏အဆင့်မြှင့်မှကြိုက်တယ်။ ယင်းအစားပြုရန်တွန်းအားပေးအခွန်များကြားမှသူတို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြန်ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ trepidation အတူလောင်းကစားရုံ၏ပိုင်ရှင်များ, ဧည့်သည်များမှဆက်စပ်။
ပေါ်တူဂီမှာကစားနေစဉ်တွင်, ကအချိန်ရဲ့အစကနေ, သလိုပဲ, အထူးပြုအဖွဲ့အစည်းများအတွက် XIX ရာစုအတွင်းသာဖွင့်လှစ်လာတယ်။ တစ်ဦးချစ်စရာကောင်းနှင့်ပါမြို့ - ပထမလောင်းကစားရုံ Fuzheyra da Foz ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အလွန်လောင်းကစားဝိုင်းတည်ထောင်အာဏာအပြောင်းအလဲကိုရုံနှစ်အနည်းငယ်သည်အထိချောချောမွေ့မွေ့လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအသစ်ပါဝါနေရာတိုင်း, ဖဲချပ်ဝေ, ကစားတဲ့နှင့် slot ကစက်တွေမရရှိနိုင်ပါစေတော်မူပြီကြောင့်သစ္စာရှိမှုကိုပြသထားသည်။ ကာစီနိုလောင်းကစားရုံကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများအတွက်ဖွင့်လှစ်ရန်စတင်ဒီတော့နယ်မြေအဖွဲ့အစည်းအပေါ်အထူးကန့်သတ်, ချမှတ်ထားကြသည်မဟုတ်။ ပထမဦးဆုံးအ Espinho နှင့် Povoa က de Varzim အတွက်တုတ်ကိုယူ။
ပါဝါကိုထပ်နှင့်ပဲ့မှာအစားထိုးဖြစ်လာခဲ့သည်တဲ့အခါမှာ Antonio Salazar2ပိုပြီးလောင်းကစားဝိုင်းအိမ်များရရှိခဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင်သီးခြားအတွေးများ၏တည်နေရာ။ တဦးတည်းလောင်းကစားရုံအခြား, ပုံ Madeira အပေါ် running - Estoril အတွက်လက်တွေ့ကျကျအဆိုပါလစ္စဘွန်းတွင်။ မြို့တော်၏ဗဟိုကနေမှသာ 15 ကီလိုမီတာ၏ဤခေတ်သစ်အဖွဲ့အစည်းမှ မြို့ခံများကနှင့်ဧည့်သည်များသည့်အချိန်တွင်မဆိုအဓိကမြို့ပျော်မွေ့နိုင်အောင်။ အဆိုပါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သာ 15 ကီလိုမီတာကွာလည်းဖြစ်ပါတယ် .
ကာစီနိုခရိုင်နာမဖြင့်သမုတ်သောခဲ့သည် - " Estoril "။ အဆိုပါအဆင်ပြေတည်နေရာသူ့ကိုတစ်ဝက်အောင်မြင်မှုဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ။ က Cascais ၏ပင်လယ်အော်၏ကမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်အဖြစ်ထိုအရပ်ကိုကိုယ်နှိုက်ကအရမ်းပါသည်။ နယ်မြေတွေကိုဆောင်ဖို့နှင့်ဇိမ်ခံနှင့်ဂိမ်းနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်း pastime ရှိပါတယ်။
စကားမစပ် "Estoril" အကြီးဆုံးလောင်းကစားရုံပေါ်တူဂီအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းဥရောပတိုက်တွင်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဘွန်းပရိတ်သတ်တွေကဒီမှ Ian Fleming က၏အကြိုက်ဆုံးနေရာများကိုတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရန်စိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်။ သူကသူ့အယူအဆ "Casino Royale" ဒီမှာမွေးဖွားခဲ့သည်တစ်ဝတ္ထုရေးဖို့ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ ဒါနဲ့သူလျှိုများ၏ဂျိမ်းစ်ဘွန်းစီးရီးထွန်းကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့သည်ပေါ်တူဂီကာစီနိုလောင်းကစားရုံကကြွေး။
"Estoril" ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်အဖြစ်တစ်ခုအနုပညာပြခန်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံများနယ်မြေထဲတွင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကျင်းပလျက်ရှိသည်။ ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံ၏ကြယ်ရှိပါတယ်ပတ်ပတ်လည်အားလုံးတစ်နှစ်, ဘာသာစကားမြားစှာတိုက်ရိုက်ဂီတ, သီချင်းဆို, jazz ဖျော်ဖြေပွဲအိမ်ရှင်အဖြစ်။ ဤတွင်ဖဲချပ်ဝေပြိုင်ပွဲကျင်းပကြသည်။
ရီးရဲလ်ပေါ်တူဂီအတွက်လောင်းကစားရုံနှင့်တစ်ဦးကို virtual အခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ 2003 ကနေလက်ဝါးကြီးအုပ် 2012 ဖို့သီးသန့်ပိုင်ဒေသခံကုမ္ပဏီစန်တာ CASA က de Misericordia က de Lisboa ။
သို့သော် 2012 အတွက်အစိုးရကနိုင်ငံခြားအော်ပရေတာများအတွက်နယ်စပ်ဖွင့်လှစ်။ 2014 အသုံးပြုပုံလိုင်စင်အများအပြားလူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုလက်ခံရရှိ, ဒါကြောင့်သင်ကြောင့်ကွန်ပျူတာလက်တော့သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းရဲ့ထွက်ခွာမဟုတ်တရားဝင်ကစားနိုင်ပါတယ်။
စိန့်ဂျော့ခ်ျရဲ့ရဲတိုက် ။ နေရပ်လိပ်စာ: Rua က de Santa Cruz Castelo, 1100-129 Lisboa လုပ်ပါ။ ဤသည်မြို့တော်မဆိုအချက်အနေဖြင့်မြင်နိုင်သောလစ္စဘွန်း, ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားရဲတိုက်၏သမိုင်းဝင်စင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းခံတပ်၏အသက်အကြီးဆုံးဒြပ်စင် VI ကိုရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ထားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ XII ရာစုအထိက Moorish စော်ဘွား၏နေအိမ်သို့ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Calouste Gulbenkian ပြတိုက် ။ နေရပ်လိပ်စာ: AV ။ က de Berna 45A, 1067-001 Lisboa ။ နိုင်ငံတော်မှကူးစက်ဘာသာစကား Armenian မူရင်းပုဂ္ဂလိကငွေကောက်ခံရေနံသူဌေး, Bole အဘိဓါန်အနုပညာ 6000 တ္ထုများပါရှိသည်။ ပန်းချီများစုဆောင်းခြင်းများအပြင်ရှေးဟောင်းပရိဘောဂ, ရုပ်ပွားတော်, လက်ဝတ်ရတနာ, ရှေးဟောင်းကြွေထည်များနှင့်လျှောက်ထားအနုပညာ၏အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။
လစ္စဘွန်း Oceanarium ။ နေရပ်လိပ်စာ: Esplanada Dom ကားလို့စ်, ငါကိုယ့် / n 1990-005 Lisboa ။ အဆိုပါဆိပ်ခံတံတားမှာလေယာဉ်တင်သင်္ဘောမှအလားတူမူရင်းအဆောက်အဦး၌သင်တို့ကိုအဏ္ဏဝါမြို့သား 450 မျိုးစိတ်ကျော်မြင်နိုင်ပါသည်။
စန်တာ Justa ဓာတ်လှေကား ။ နေရပ်လိပ်စာ: Rua Ouro, 1150-060 Lisboa လုပ်ပါ။ ဤသည်ဓာတ်လှေကား 1902 ကတည်းကအပြေး, အမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ, ကမြင့်မားသော Chiado ၌သင်တို့ကိုတက်ရဖို့ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်မြေနိမ့် Baishi ။
ဘယ်လန်း၏မျှော်စင် ။ နေရပ်လိပ်စာ: Avenida Brasilia, 1400-038 Lisboa ။ ဝိန်း Fort XVI ရာစု, ဿုံထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်အရင်းအနှီးများအများဆုံးရင်ခုန်စရာအဆောက်အဦးများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါမျှော်စင် Vasco da Gama တို့ကအိန္ဒိယသို့လမ်းကြောင်း၏အဖွင့်၏ဂုဏ်အသရေအတွက်တန်ခူးလမြစ်ကျွန်းပေါ်ရပ်တည်။
ပေါ်တူဂီ matriarchal မိသားစု။
အဓိကဘာသာတရား - ကက်သလစ်ဘာသာ (96%) ။
ပေါ်တူဂီ - အသည်းအသန်ဘောလုံးပရိတ်သတ်များသည်ခပ်သိမ်းသောမြို့ဘောလုံးကွင်းကလပ်ပင်သေးငယ်တဲ့အတွက်။
အဆိုပါပေါ်တူဂီဘာသာစကား9နိုင်ငံများရှိအရာရှိတဦးက status ကိုရှိပါတယ်။
ပေါ်တူဂီ - အလွန်ရယ်စရာနှင့်ရွှင်လန်းသောလူများ, သူတို့ကဟာသနှင့်ပြက်လုံး, ဒါပေမယ့်အတန်ငယ်ရိုင်းစိုင်းကိုချစ်။ သိမ်မွေ့အင်္ဂလိပ်ဟာသမချီးမြှောက်သည်။
ပေါ်တူဂီ၏လူဦးရေရဲ့ 90% ပေါ်တူဂီဖြစ်ပါတယ်။
လစ္စဘွန်း2သန်းဘဝတွေကို။ ဘယ်အချိန်မှာ 11 သန်း၏တိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့။
လူတို့သညျအဘို့နှင့်မိန်းမတို့အဘို့ဂျိုအာမာရီယာ - ပေါ်တူဂီမှာလူကြိုက်အများဆုံးအမည်များ။
ဆေးလ်ဗား Ferreira, ဆန်းတို့စ Oliveira, Pereira, Rodriguez ကော်စတာ: ပိုမိုလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ထက်7အမည်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ပေါ်တူဂီနာမကိုအမှီ4စကားများပါဝင်ပါသည်: 1 နှင့်2ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမည်များ, mom, နှင့်အဖေ၏အမည်။
0.2 ထိပ်တန်း 10 ပေါ်တူဂီအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း